Amagama ambalwa ukuthi ungasusa kanjani umsindo kumakrofoni
Abasebenzisi be-PC futhi babonise abantu bebhizinisi bavame ukubhekana nenkinga ebangele ukuba badonsa ubuchopho babo isikhathi eside futhi babheke izindlela zokuxazulula. Yini esikhuluma ngayo? Mayelana nomsindo nempendulo, ephakama uma usebenzisa imakrofoni. Futhi lapha akukhathaleki ukuthi ngabe idivaysi yakhelwe ku-laptop yakho noma le imishini ebiza kakhulu yokuqopha umsindo. Ngenxa yezakhiwo zalo zomzimba, i-membrane ethola umsindo, indlela eyodwa noma enye, ibona ukuphazanyiswa. Lokhu kuba umzuzu ongathandeki lapho ukhuluma ne-IP telephony, ukurekhoda umsindo noma nje uma wenza esiteji. Namuhla sizozama ukuthola indlela yokususa umsindo kumakrofoni.
Okokuqala, sizobheka izindlela ezigwema ukuvela komsindo uma usebenzisa ikhompyutha. Ngakho, ngenxa yalokhu, umsebenzisi kudingeka abe:
Amakhono ayisisekelo okusebenza nomphathi ozwakalayo;
Ikhono lokusebenzisa uhlelo lokuqopha umsindo ;
Ikhono lokusetha uhlelo lwezwi (Skype, Google Hangouts, ooVoo, njll).
Ukulandela kuyimfundo yokuthi ungayicindezela kanjani umsindo wemakrofoni.
Kungani umsindo uzwakala?
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani kunokuphazamiseka. Into yokuqala yokuqonda: izinhlelo ezahlukene kwi-PC azikwazi ukukhiqiza umsindo ngokomzimba. Okungukuthi, eningi lamacala, avela ngephutha lomsebenzisi. Esinye sezimbangela ezivame kakhulu zomsindo uma usebenzisa izinhlelo ezahlukene ze-IP telephony yizinga elibi le-Inthanethi. Naphezu kokuthi izinhlelo zezwi ngokuvamile azidingi ukuba khona kwesiteshi esinamandla sokuxhumana, kufanele ube nesilinganiso esivamile sokuxhuma. I-intanethi "ebuthakathaka" i-intanethi yisona sizathu sezinga eliphansi lomsindo, kodwa futhi nokuxhumeka okuvamile. Indlela yokususa umsindo kumakrofoni kulokhu? Impendulo ilula kakhulu - ukwandisa ijubane lokuxhumana. Ukuze wenze lokhu, ngesikhathi sokuxhumana, kufanele ukhubaza ukulandwa kwamafayela abezindaba kanye nezifufula. Uma isivinini sokuxhuma siqale siphansi, ngakho-ke kunengqondo ukushintshela ohlelweni lokukhokha ngokushesha noma ukushintsha umhlinzeki.
Imisindo ngenxa yemakrofoni engasebenzi kahle
Isizathu esilandelayo esilandelayo yizinkinga ngemishini ngokwayo. Okokuqala, udinga ukuhlola ukuthi imakrofoni isebenza kahle. Uma usebenzisa i-PC yamakrofoni, kuzomele usebenzise noma yiluphi uhlelo lokurekhoda (Umbuso olula uhlanganisiwe ku-Windows OS). Ukuze wenze lokhu, ku-Windows XP, iya ku- "Qala" - "Izinhlelo" - "Standard" nakwesigaba esithi "Okokuzijabulisa", thola uhlelo "Ukuqopha umsindo". Uma une-Windows 7 noma 8 efakwe, kungcono nakakhulu. Chofoza inkinobho ethi "Qala" bese ufaka igama "ukurekhoda umsindo" enkambini yokusesha. Qalisa uhlelo. Ngosizo lwaso isigaba esifushane sesinqumo sakho sibhaliwe, emva kwalokho izinga elizwakalayo lihlolwe.
Uma uzwa imisindo ekuqosheni okwenzayo, udinga ukuqonda imakrofoni ngokwayo. Isixazululo esifanele singase sibe ukusetshenziswa kwenye idivayisi. Kodwa uma lokhu kungasondeli, ungakwenza ngezindlela ezifakiwe. Emkhatsini wemakrofoni, udinga ukwenza i-raber ye-foam noma uboya ibhola (njengabathengisi bezindaba ze-TV). Futhi, qiniseka ukuthi imakrofoni ayikude kakhulu uma ukhuluma. Uma ngabekwa ngaphandle kwendawo yokuzwela kwayo, kungenzeka ukuthi ukuphazanyiswa kwenzeka kaningana.
Iphutha kubashayeli nezilungiselelo
Isizathu sokugcina somsindo amaphutha wesofthiwe. Indlela yokususa umsindo kumakrofoni, uma izindlela ezimbili zangaphambilini azihambisani? Kufanele ubuyekeze abashayeli bekhadi lezwi. Ngokujwayelekile i-disc ifika nebhodi le-motherboard (uma ikhadi lakhiwe-ngaphakathi) noma ebhokisini enekhadi lezwi ngokwayo. Kumakhadi alalelwayo we-Realtek, ungavumela ukukhansela nokukhanselwa kwe-echo. Ukuze wenze lokhu, iya kwipaneli yokulawula umsindo kuthebhu "Imakrofoni", lapho okuphambene khona nezinketho ezihambelanayo ukuphawula.
Esinye isixazululo esiphumelelayo singase sinciphise ukuzwela kwemakrofoni, ngoba kungenzeka ukuthi ilungisa okuningi kunalokho okufanele. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthola imenyu "Izilungiselelo Zomsindo" ku-inthanethi ye-telephony application oyisebenzisayo. Ewindini evuliwe, kufanele ulungise i-slider yevolumu (kungenzeka ukuthi unayo esikhundleni sayo esiphezulu).
Ukukhuluma esiteji noma ukurekhoda
Indlela yokususa umsindo kumakrofoni phakathi nokusebenza noma ukusebenza ku-studio yokurekhoda? Ngaphambi kokuba uphile ukusebenza, kufanele ulungiselele ngaphambilini imakrofoni. Ukuze wenze lokhu, ku- console yokuxuba kumele kukhethwe isilinganiso esiphezulu sobuzwe nokulawula ivolumu. Ngokuvamile, umsindo uvela ngoba isilayidi samandla esignali yamandla esivela kakhulu. Okusho ukuthi kunengqondo ukunciphisa ubuzwe besignali.
Uma ungeke ukwazi ukulahla imisindo engaphandle futhi uzwakale kumarekhodi, khona-ke uhlelo lokunciphisa umsindo womakrofoni luzosiza. I-algorithm yayo ngokuthembekile isusa yonke imisindo ezwakalayo, enevolumu ephansi kune-preset eyodwa. Ngakho-ke, umsindo uzosuswa emgqeni womsindo, kanti izingoma zezwi nezomculo zizohlala zingasetshenziswanga. Manje uyakwazi ukususa umsindo wangemuva wemakrofoni.
Marshall headphones: amamodeli, ukubuyekezwa kwamakhasimende
Awuvuli ithebhulethi? Yini okufanele yenziwe?
Yini okufanele ibe ikhompyutha yethebulethi yabantwana?
I-Smart ilinda i-Samsung Gear 2 Neo: ukucaciswa nokubuyekezwa
Sibutsetelo se-console ye-Nokia N-Gage: incazelo, izici nokubuyekezwa
Buyela ku-amafa ngokomongo amathemba utshalomali
Elegant isigqoko hook. Thina ubuyekeze lezingubo ehlobo
Ubende: okungukuthi, imisebenzi, izifo
Izimbangela kanye nokwelashwa microbial eczema wamafutha, izithombe
Hossoni, amapotimende: Izibuyekezo ikhasimende
Ingabe kuyiqiniso ukuthi imodeli obukhulu ethandwa futhi?
Paddle: incazelo isimiso yokusebenza, ukusetshenziswa ekhaya kanye umkhakha
Ezincwadini ezinhle zimba ngokuzithandela. Okushiwo isaga nemifanekiso yaso kwezinye izilimi
Imidwebo Viktora Vasnetsova - umlando Russia namasiko alo
UMbusi Akihito - lo mbusi kuphela emhlabeni
Izilwane iRed egwalweni Novosibirsk esifundeni: incazelo, isithombe